Igwe ojii na usoro ikuku | Netwọk Mgbasa Ozi
Cirrus enweghị mmasị
Kemgbe mmalite ya, nchepụta echiche nke mmadụ nwalere, ma ka na-aga n'ihu, ịkpụzi igwe ojii, iji hụ ihe odide sitere na akụkọ ma ọ bụ akụkọ ifo na mbara igwe. Na cirrus Ha bụ ụdị igwe ojii nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe, ebe anyị nwere ike ịhụ ha ihe niile n'ime afọ, yabụ enwere ike ịsị na ha na-eso anyị ụbọchị ndụ anyị kwa ụbọchị.
Ugbu a, olee otu esi akpụ ha na ụdị ndị dị ebe ahụ? Chọpụta.
Igwe ojii Cirrus, ma ọ bụ nke a maara nke ọma dị ka cirrus na Spanish, bụ ụdị igwe ojii nke ahụ nwere kristal ice, ebe ọ bụ na ha nọ na okpomọkụ nke Ogo 40 n'okpuru efu. Ha pụtara na ebe dị elu, n'etiti 8 na 12 kilomita, nke mere na ụgbọ elu, mgbe ọ na-agafe ha nwere ike gbanwee ha ngwa ngwa, ebe ndị njem na-atachi obere ọgba aghara. Mana n'agbanyeghị ihe niile, ha bụ igwe ojii na-achọ ịmata ihe, nke ọma ha na-ekpuchi okpomọkụ, ma ha na-enwupụtakwa ìhè anyanwụ.
Mgbe ị hụrụ ha n’elu igwe, ọkachasị ma ọ bụ oge ọkọchị ma ọ dị ogologo oge n’enweghị otu drizzle, ọ bụ oge ị toụrị ọ :ụ: na-abụkarị ihe ịrịba ama nke usoro usoro, ma ọ bụ ọbụna oké ifufe. Mana ọ bụrụ na ị hụ na e nwere nnukwu ọkwa ... pụọ, ebe usoro ndị a na-eso ifufe.
E nwere ọtụtụ ụdị nke cirrus, dị ka:
Cirrus dị ka mmiri
Dị ka anyị kwuru, ha bụ ụdị igwe ojii ahụ nke ike gwụrụ gị ịhụ. Ha na-enwe ụdị dị ịtụnanya, kwesiri ijide igwefoto. Ha na - akpọkwa uche ka ị dọpụ ma kwụsị, ihe na - anaghị emerụ ahụ site n’oge ruo n’oge, nri? 😉
Kedu ihe ị chere gbasara igwe ojii cirrus? Hà na-echetara gị mgbe ụfọdụ banyere ịdị adị - nke mere eme ma ọ bụ akụkọ ifo - nke ị hụla na telivishọn, n'akwụkwọ ma ọ bụ na magazin?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Igwe ojii Cirrus, na-achọsi ike dịka ole na ole